जाग नेपाल: 2009
छैटौँ महाधिवेसनको सन्दर्भमा
नेपाल मगर विद्यार्थी संघको दोस्रोदेखि पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेसनसम्म प्रतिनिधि बनेको यस पंक्तिकारले छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेसनमा त्यो भूमिका पाउने छैन । पाँचौँ महाधिवेसनबाट उसको संघसँगको प्रत्यक्ष साइनो छुटि्टएको छ तर भावनात्मक सम्बन्धको नशा चुँडिइसकेको छैन । कहिले कार्यकर्ता, कहिले नेतृत्वकर्ता हुँदै अहिले संघबाट निवृत्त फरक-फरक परिचयमा रहेर संघको कार्य नियालिरहेको छ ।
२०५१ सालमा सीमित मगर युवा विद्यार्थीहरुबाट स्थापित मगर विद्यार्थी संघ अहिले देशभित्र र देशबाहिर छरिएर रहेका मगर समुदायबीच परिचित भइसकेको छ । मगर समुदायभित्र आशा र भरोसाका केन्द्र तथा सहयात्री आदिवासी जनजाति विद्यार्थी संघहरुमाझ नेतृत्वदायी हैसियत पनि यसले प्राप्त गरिसकेको छ भने सिंगो आदिवासी जनजाति समुदाय यसबाट अपरिचित, नौलो छैन । देशभित्रका धेरै अञ्चल, जिल्ला, सरकारी तथा पब्लिक क्याम्पसहरुमा संघको संरचना निर्माण भइसकेका छन् । सदस्य संख्याको यकिन तथ्यांक नभए पनि लाखौँ मगर विद्यार्थी संघको सम्पर्क र नेतृत्व मातहतमा रहेको अनुमान गर्नु गलत हुँदैन । यति सघन संरचना बनाइसकेको संगठनलाई समयसापेक्ष कसरी अगाडि बढाउने, सैद्धान्तिक, वैचारिक र ब्यावहारिक रुपमा कसरी आकर्षणको केन्द्र बनाउने यही नै छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेसनको सन्दर्भमा सार्थक छलफलको केन्द्रीय विषय बन्न पुगेको छ ।
मगर विद्यार्थी संघको विधान पल्टाउने हो भने यसको सारभूत उद्देश्य मगर जातिलाई शैक्षिक जागरणको मूलबाटोमा ल्याउने रहेको देखिन्छ । विधानका धेरैवटा बुँदामा यही कुरामा घुमाइफिराइ जोड दिइएको छ । मगर विद्यार्थी संघ स्थापनाको १५ वर्षे अवधिमा संघको अभियान, संघका कार्यक्रमकै कारण कति मगर विद्यार्थीहरुले शिक्षाको पारिलो घाम ताप्न पाए त्यसको वैज्ञानिक र औपचारिक अनुसन्धान भएको छैन । संघले आयोजना गर्ने हरेकस्तरका कार्यक्रमहरुमा वक्ताहरुले शिक्षाको महत्वमाथि जोड दिँदै दिने प्रवचनहरुले समाजमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ त्यसको पनि कुनै हिसाब गर्न सकिएको छैन । निश्चित कुरा चाहिँ के हो भने संघले अहिलेसम्म शैक्षिक जागरणका लागि अलग्गै अभियान सञ्चालन गरेको पाइएको छैन । एकपटक यस पंक्तिकार केन्द्रीय समितिमा रहँदा कुनै मगर बाहुल्य तर शैक्षिक चेतना कमजोर भएको क्षेत्रमा एक महिने शैक्षिक जागरण अभियान चलाउने छलफल भएको थियो तथापि त्यो छलफलमै सीमित भयो । त्यसपछि पनि त्यस्तो कुनै छलफल र अभियान चलाइएको थाहा छैन । यत्रो सञ्जाल भएको संगठनले कम्तीमा वर्षमा पाँचवटा मात्र यस्ता अभियानहरु चलाउने हो भने मगर जातिको शैक्षिकस्तर उकास्नमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने थियो । संघलाई वर्षमा यस्ता अभियान दर्जनौँ स्थानमा चलाउन गाह्रो पर्ने पनि देखिादैन । आउने नेतृत्वको ध्यान त्यता पनि जाओस् ।
संघको शाखा संगठन कति छन्, कहाँ कहाँ छन् ? कुन समितिका जिम्मेवार नेता पदाधिकारी को को हुन् भन्ने प्राय थाहा पाउन सकिए पनि संघमा कति सदस्य छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर न यसअघिका पदाधिकारीहरुले दिन सके न त वर्तमान पदाधिकारीहरुले नै सक्छन् । संगठनको ढाँचाकाँचा जस्ताको तस्तै रहन दिने हो भने अब आउने पदाधिकारीहरुको पनि अवस्था त्यस्तै हुन्छ । त्यसैले सदस्य बनाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सकियो भने यस प्रश्नको जवाफ पाउन सकिन्छ ।
संगठनलाई भावनात्मक कम र जिम्मेवारीयुक्त ज्यादा बनाउन सकियो भने धेरै काम स्वतः व्यवस्थित हुने छन् । यसका लागि संघले विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । एकैदिन वा एकैछिनको मिहिनेतले मानिसको सोचाइ बदलिने कुरो हुादैन तर एकै उद्देश्यका लागि फरकफरक कार्यक्रमहरु लगातार गरिरहेको अवस्थामा त्यसले परिणाम दिनेमा शंका पनि छैन । अहिले संघमा लागेका मगर विद्यार्थीहरु बढी भावनाले चलेका देखिन्छन् । हुन त संगठन भावना र विचारले नै चल्ने हो तर कार्यकर्ताहरुमा संघको उद्देश्यबारेमा जानकारी नै भएन भने भावनाको अर्थ के ? संघमा हिँड्नेहरुको क्रियाकलाप अवलोकन गर्दा उद्देश्यसंगत, उद्देश्यसम्मत देखिँदैनन् । त्यसैले मगर विद्यार्थीहरुलाई मगर विद्यार्थी संघमा लाग्न जिम्मेवार बनाउने अभियानलाई पनि दीर्घकालिन अभियानकै रुपमा लैजान जरुरी छ । जसले संघलाई संख्यात्मक मात्र होइन गुणात्मक विकास गराउन सहयोग गर्ने छ ।
राजनीतिक संगठनहरुका लागि त उच्चमाध्यमिक विद्यालयहरुमा संगठन निर्माण चुनौतीको पहाड बनेको छ भने मगर विद्यार्थी संघका लागि त सगरमाथा नहुने कुरै भएन । भएन त्यसमाथि गत महाधिवेसनबाट माध्यमिक विद्यालयहरुमा समेत संघ गठन गर्न सकिने वैधानिक व्यवस्था भएपछि ती शैक्षिक संस्थामा पनि संगठन विस्तार एउटा चुनौती नै छ । एक्काइसौँ शताब्दी पनि जातीय कुरा गर्ने ? जातीय कुरा गरेर साम्प्रदायिक सद्भाव विथोल्ने ? भन्नेजस्ता वचनका वाणहरु पहिले जस्तो तीखो गरी प्रहार नभए पनि अहिले पनि त्यस्ता वाण बर्साउने धनुर्धारीहरुको कमी छैन । तरल राजनीतिक अवस्थाका कारण जातीय समस्या समाधानका पक्ष र विपक्षमा उत्तिकै विचारका ज्वारभाटाहरु उठिरहेका छन् । तिनले मगर विद्यार्थी संघलाई संगठन गर्नमा सजिलो र असजिलो दुवै हुनसक्छ ।
मगर विद्यार्थी संघमा लाग्नु राजनीतिक विद्यार्थी संगठनमा लाग्नुजस्तो करियर प्लस हुने प्लेटर्फम बन्न सकेको छैन । मगर विद्यार्थी संघमा लागेर व्यक्तिको करियरमा कति सहयोग हुन सक्छ ? संघमा लागेकै कारण व्यक्ति कति सफल बन्न सक्छ ? संघमा गम्भीरतापूर्वक लाग्ने हरेक विद्यार्थीले यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने गर्दछन् । हालसम्मको अनुभव हेर्दा संघमा लाग्ने विद्यार्थीहरुले आ-आफ्नो करियर त बनाएका छन् तर आफ्नै मिहिनेतले । संघले करियर खोजिदिने वा बनाइदिने भन्दा पनि व्यक्ति आफैाले खोजी गरेर व्यवस्थित हुने गरेका छन् । अब संघले कार्यकर्ताको करियर स्थापित हुने काम पनि गर्नु आवश्यक छ, संघप्रति आकर्षण जगाउनका लागि ।
संघमा यस पंक्तिकार विद्यमान छादा रचनात्मक क्रियाकलाप सम्बन्धी विभिन्न सोचाइहरु पदाधिकारी तथा सदस्यहरुबाट आउँथे । छलफल हुन्थे । कहिले मेची महाकाली साइकल यात्रा, कहिले मगर साँस्कृतिक महोत्सव वा मगर महोत्सवको । सबै सोचाइहरु नवीन थिए हाम्रा समाजका लागि । तर ती सबै कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीसित आर्थिक शक्तिको जरुरी हुन्थ्यो । मगजमा अत्यन्त सुन्दर सपनाहरु सजाए पनि हातमा पैसा नहुँदा हाम्रा ती सपनाहरु गर्भमै तुहिए, वर्तमान नेतृत्वमा रहेका साथीहरुको सपना पनि त्यही मार्गमा होलान् । संघले अनिवार्य रुपमै गर्नुपर्ने स्थापना दिवस, मगर दिवस, लखन दिवस जस्ता कर्मकाण्ड बाहेक नयाँ कार्यक्रमहरु खासै दिन सकिएन । अहिले पनि त्यही अवस्थाबाट संघ गुज्रिरहेको देखिन्छ ।
यति ठूलो सञ्जाल भएको संगठनले चाह्यो भने आर्थिकरुपमा सुदृढ र सबल हुन त्यति गारो कुरै छैन । ठूलो जनशक्ति समस्या हैन, त्यो जनशक्तिलाई सदुपयोग गर्ने शक्ति र जुक्ति चाहिँ ठूलो कुरा हो । संगठित जनशक्तिलाई विभिन्न उपायबाट आर्थिक संकलन गर्ने काममा लगाउन सकिन्छ । खाँचो छ त केवल तिनीहरुलाई परिचालन गर्ने योजनाको । संगठनको उद्देश्यसाग मेल खाने विभिन्न योजना, आयोजना, कार्यक्रम, अभियानमा उनीहरुलाई संगठित रुपमा सहभागी गराएरै पनि आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ । सधैा चन्दा मागेर संगठन चलाउने भन्दा संघको आफ्नै दीर्घकालीन स्रोत बनाउनु आवश्यक मात्र हैन अत्यावश्यक नै भइसकेको छ ।
सफलता पनि छन्
अहिलेसम्म मगर विद्यार्थी संघले केही गर्न सकेन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो पूरै पूर्वाग्रही विश्लेषण हुने छ । व्यापारिक कम्पनीमा जस्तो हरेक साल नाफा घाटा सामाजिक संगठनहरुमा पाउन कठिन हुन्छ । मगर हुँ भन्न पनि हिच्किचाउने मगर विद्यार्थीहरुलाई म मगर हुँ भनेर गर्वपूर्वक भन्नसक्ने, संघमा लाग्नसक्ने बनाउनु नै मगर विद्यार्थी संघको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो । मगर विद्यार्थीको नेतृत्व क्षमता विकास गर्न संघले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकाकै कारण आज धेरै राजनीतिक विद्यार्थी संघहरुमा मगर विद्यार्थीहरुले पनि अवसर पाएका छन् । शैक्षिक सत्ताका रुपमा रहेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा चुनिने अवसर पाएका छन् । मगर विद्यार्थीहरुको यस्तो उपस्थितिका कारण मगर विद्यार्थीका समस्याहरु अरु समुदायलाई जानकारी हुन सजिलो भएको छ ।
शैक्षिक सत्तामात्र होइन राज्यसत्ताका विभिन्न अंगहरु संसद, लोकसेवा, प्रहरी, सैनिक तथा अन्य अवसरहरुमा समानुपातिक सहभागिता र आरक्षणको व्यवस्था हुनुको पछाडि मगर विद्यार्थी संघको पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका छ भन्दा अन्यथा नहोला । यस्तै, सिंगो मगर जातिको जातीय संस्था नेपाल मगर संघलाई आवश्यक कार्यकर्ता उत्पादन गर्न, मगर संघका निर्णयहरु कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न तथा कतिपय अवस्थामा खबरदारी गर्न पनि विद्यार्थी संघ सफल भएको छ । यस्ता परोक्ष अप्रत्यक्ष उपलब्धिका फेहरिस्त नै छन् ।
जबजब मगर विद्यार्थी संघको महाधिवेसन आउँछ अवसरवादीहरुको चलखेल शुरु हुन्छ । यस पंक्तिकारको संलग्नता रहेका सबै महाधिवेसनहरुमा ती भाइरसहरुले राम्रैसित प्रभाव जमाउन खोजेका थिए कतिपयमा उनीहरु केही हदसम्म सफल भए, कतिपयमा धूलो चाटेर फर्के । अरुबेला संघमा नाकमुख नदेखाउनेहरु, संघका विभिन्न समितिका विभिन्न जिम्मेवारी पदमा रहेर पनि माखो नमार्नेहरु महाधिवेसनको तिथि घोषणा भयो कि गणेश दौड गर्न थाल्छन् । महाधिवेसनलाई कसरी भाँड्ने, कसरी पद हत्याउने, काम गर्नेहरुलाई कसरी छिर्के हान्ने दाउ हेर्न थाल्छन् । संघका कार्यकर्तामाझ कुनै प्रभाव नभएपछि ती कामचोर, पदलोलुपहरु अमुक राजनीतिक पार्टीको झण्डा समात्न थाल्छन् । संघको नेतृत्व चयनमा प्रभाव पार्ने व्यक्तित्वहरुको वरिपरि चाकडी गर्न थाल्छन् । तिनीहरुलाई संघको कुनै मायामोह हुँदैन, जसरी हुन्छ महाधिवेसनको तिथि लम्ब्याएर होस् वा संघलाई ऋणको कुवामा डुवाएर होस् पद ओगटेरै छाड्न खोज्छन् । भलै कुनै काकताली लागेर पद पाए पनि चुनिएको भोलिपल्टदेखि उनीहरुको नाकमुख औाशी पूर्णेमा देख्न पाए त ठूलो कुरा, पूरै अर्को महाधिवेसन कुर्नुपर्छ । अर्को महाधिवेसनमा उनीहरुलाई नै बढुवा चाहिन्छ मानौ संगठन तिनको बाउको विर्ता हो । सिन्को नभाँची संघमा पेन्सन पकाउन चाहन्छन् तिनीहरु ।
विगतमा दलीय भागवण्डाको नाममा होस् वा क्षेत्रीय सन्तुलनको बहानामा, सक्रिय र संगठनप्रति समर्पित कार्यकर्ताहरुले पाखा लाग्नुपरेको पनि छ । संघको विरुद्धमा लाग्ने, महाधिवेसन भाँड्छु, संघलाई टुक्र्याउँछु भन्नेहरु, तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्नेहरु, संगठनको दामासाहीमा परेकाहरु, लेवी नबुझाएकाहरु, संगठनको आर्थिक हिनामिना गरेकाहरु मात्र होइन मगर जातिभित्रै नपरेकाहरुले पनि संघबाट कारबाही होइन पुरस्कारस्वरुप विभिन्न पद पड्काएका छन् । संघभित्र वैचारिक विविधता, क्षेत्रीय सन्तुलन, लैङ्गिक सन्तुलन आवश्यक छ तर त्यसको पनि छनौटको आधार कार्यसम्पादन नै हुनुपर्छ । काम नगर्नेहरुलाई संघमा रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्नु भनेको इमान्दार कार्यकर्तालाई गलहत्याएर संघबाट निकाल्नु मात्र हो ।
संघभित्र यति वफादार, इमान्दार र लगनशील कार्यकर्ता छन् भन्ने संघमा लाग्ने जो सुकैलाई थाहा छ । पंक्तिकार नेतृत्वमा रहादा हेटौँडामा २०६३ सालमा भएको राष्ट्रिय विस्तारित भेलाको तयारीका क्रममा पत्रिका बिछ्याएर चिउरा, मुरही र दालमोठ खाएर भेला सफल बनाउने साथीहरु, २०६० सालमा नेपालगञ्जमा भएको विस्तारित भेलामा खर्च घटाउन फुकीफुकी तौलीतौली योजना बनाउने साथीहरु सम्झँदा अहिले पनि उनीहरुलाई सलाम गर्न मन लाग्छ । यी त केही उदाहरण मात्र हुन्, भोकै, आफ्नो सबै काम छोडेर, नसुतेरै संघको काम गर्ने साथीहरु देशभरि नै छन् । छैटौँ महाधिवेसनले नेतृत्व चयन गर्दा ती साथीहरुको शीर ननिहुरियोस् ।
विद्यार्थी संघ भए पनि संघको उद्देश्य भनेको मगर जातिको समग्र मुक्ति नै हो । मगर जातिलाई भेदभाव, शोषण, उत्पीडनबाट अलग गर्ने नै हो । यसका लागि मगर जातिबीच सर्वस्वीकार्य जुक्ति भनेको मगर बाहुल्य र मगरहरुको आदिभूमिमा मगरात राज्य स्थापना तथा अन्य स्थानमा जातीय जनसंख्याको आधारमा राज्यका सबै अंगमा मगर जातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नै हो । यो आममत स्वीकार गर्न नसक्नेहरु, जातीय आधारमा राज्य बन्न हुँदैन भनेर सिंगो जनजातिमाथि थप शोषण गर्न चाहनेका मतियारहरुले विद्यार्थी संघको वैचारिक नेतृत्व हाँक्न सक्दै सक्दैनन् । मगरातका बारेमा आफैा अस्पष्ट र अनिच्छुक रहनेहरुलाई नेतृत्वमा ल्याउनु भनेको घरमै सर्पलाई दुध खुवाएर पाल्नु मात्र हुन्छ । छैँटौँ महाधिवेसनका प्रतिनिधिहरुलाई चेतना भया ।
नेपाल मगर विद्यार्थी संघको मुखपत्र मगर आवाजमा प्रकाशित
Posted by Naresh at 10:35 PM No comments:
उपराष्ट्रपति नहुँदा कर्मचारीलाई न्यास्रो
मर्यादाक्रममा दोस्रो स्थानमा रहेका उपराष्ट्रपतिको कार्यालय अहिले 'रानोबिनाको माहुरीको घार' जस्तै बनेको छ ।
तीन महिनादेखि देशमा उपराष्ट्रपति निष्त्रिmय अवस्थामा रहे पनि ३० कर्मचारीले उपराष्ट्रपतिको कार्यालय चलाइरहेका छन् । जसको नाममा कार्यालय स्थापना भएको हो, उही नभएको अवस्थालाई कर्मचारीहरूले पनि खल्लो मानेका छन् ।
अरू -उपराष्ट्रपति बहाल रहेको) बेला सुरक्षाकर्मी र भेट्न आउनेहरूको लर्को लाग्ने बहादुरभवन अहिले चकमन्न छ । सुरक्षाकर्मीको स्टर्किङको तीखो साइरन अब बिर्सिन थालिसकिएको छ । ढोकामा दुई नेपाली सेनाका सैनिकले तीन/तीन घन्टामा बदली हुँदै पहरा दिइरहेका छन् ।
ढोका छिचोल्नासाथ टेकिने जनसम्पर्क कक्षमा अहिले न भेट्न आउनेहरूको ताँती छ, न त चेकजाँच गर्ने सुरक्षाकर्मीहरू नै छन्, न छन् सोधपुछ गर्ने, नाम टिप्ने कर्मचारीहरू नै । मात्र रित्ता कुर्सीहरू आगन्तुक कुरेर बसिरहेकाजस्ता भेटिन्छन् ।
दुई तला माथि रहेको उपराष्ट्रपतिको कार्यकक्षबाहिर केही कर्मचारी उपराष्ट्रपति नभए पनि 'ड्युटी' गरिरहेका छन् । "हामी त कर्मचारी, कार्यालयमा जेजस्तो काम परे पनि गर्छौं", सचिवालयका कर्मचारी हरिबहादुर कार्कीले भन्नुभयो ।
परमानन्द झाको उपराष्ट्रपति पद निष्त्रिmय भए पनि उपराष्ट्रपति कार्यालयबाहिर 'परमानन्द झा, उपराष्ट्रपति' अङ्कित नामपाटी भने अझै छ । सायद उहाँकै प्रतीक्षामा हो कि ? "हामीले राखेका पनि होइनौँ, त्यसैले हटाउने कुरा पनि भएन । राज्यले राखिदियो, राज्यले नै हटाउनू भन्नु पर्‍यो", कार्कीले प्रस्टीकरण दिनुभयो ।
सरसफाइका लागि हरेक दिन बिराएर उपराष्ट्रपति कार्यकक्ष कर्मचारीहरूले सफा गर्ने गरेका छन् । "खोलेन भने त बाफिइहाल्छ नि", कार्कीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार एक/दुई दिन बिराएर कोठा खोल्ने, सफा गर्ने, पङ्खा चलाउने गरिएको छ । "हिजोमात्र खोलेको", उहाँले थप्नुभयो ।
भदौ १५ गतेदेखि कार्यालय आउन छाडेका झाले यसबीच बेलाबेलामा फोन गरी कार्यालयको खबर के छ भनी कर्मचारीलाई सोध्ने गर्नुभएको छ । केही दिनअघि जनकपुरको विवाहपञ्चमी मेलाका लागि ˆयाक्समार्फत आएको निमन्त्रणापत्र पठाइदिन झाले फोन गर्नुभएको थियो । उपराष्ट्रपतिले चढ्ने किया र ल्यान्डक्रुजर गाडी अहिले बहादुरभवन प्राङ्गणमा रहेको ग्यारेजमा 'आराम' गरिरहेका छन् । दैनिक उपयोग नभएर होला, गाडीमाथि धूलोको सहत बढ्दो छ । चालकहरूले बेलाबेलामा गाडी स्टार्ट र सफा गर्छन् ।
कार्यालयका सचिव नाथुप्रसाद चौधरी उपराष्ट्रपति हुँदा कार्यालयको रौनक नै अर्को हुने बताउनुहुन्छ । "उहाँ -उपराष्ट्रपति) हुँदा कहिले नेताहरू, कहिले मन्त्रीहरू, कहिले उहाँका जिल्लाबासी, कहिले बालबालिका आउँथे, कार्यालयको रौनकै अर्को हुन्थ्यो", चौधरीले भन्नुभयो ।
उपराष्ट्रपति नहुँदा पनि दैनिक कार्यसम्पादनमा कर्मचारीहरूलाई कुनै असजिलो नभएको र काम पनि नरोकिएको उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो ।
"उपराष्ट्रपतिज्यू र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयबीच दैनिक कामकाज नै रोकिने गरी 'टाई अप' नभएकाले कार्यालयको कार्य सञ्चालनमा कुनै बाधा परेको छैन", कार्यालयका कानुन उपसचिव सुशील कोइरालाले भन्नुभयो, "तैपनि मनोवैज्ञानिक प्रभाव त परिहाल्छ, अभिभावक हुनु र नहुनुजस्तो ।"
Posted by Naresh at 11:38 PM 1 comment:
मनु पनि बेलायत गइछन्
मनु ठाडा पनि बेलायत गइछन् नि । नेपाल मगर विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्र थापाले सुनाउँदा पत्याइनँ । बेलायत गएकी हैनन होला । गएकी नै भए पनि घुम्न गएकी होलिन् । मैले तर्क गरेँ । सँगै रहेका साथी भोजविक्रम बुढामगरले पनि पत्याएनन् ।
करिब सात वर्षअघि धनकुटामा पहिलोपटक भेट हुँदा मनु ठाडा मगर विद्यार्थी संघको जिल्ला अध्यक्ष थिइन् । बीएड सकेर काठमाडौँ आउने तयारीसहित संघको नेतृत्व पनि हस्तान्तरण गर्दै थिइन् । एक सम्भावनायुक्त नेतृत्व थियो उनको । त्यसैले काठमाडौँ आउनु भएपछि मगर विद्यार्थी संघको केन्द्रीय समितिमा बस्न मैले अनुरोध पनि गरेको थिएँ भलै उनले स्वीकार गरिनन् । पढाइलाई नै अघि बढाउने उनको योजना थियो । योजना मुताबिक नै फटाफट डिग्री सकिन् पनि । यसबीचमा एसएनभी र मार्टिन चौतारीमा स्वतन्त्र अनुसन्धानका काम पनि गर्न भ्याइन् ।
धनकुटाबाट निस्के हाम्रो विचार साप्ताहिककी सम्पादक पनि रहेकी उनी गत सात मेरै अध्यक्षतामा गठित मगर आमसन्चारकर्मी समाजकी कोषाध्यक्ष पनि थिइन् । पत्रपत्रिकामा उनका शोधमूलक खोजमूलक लेखहरु छापिन थालेका थिए । मगर समुदायका कार्यक्रमहरुमा बौद्धिक टिप्पणी पनि गर्न थालेकी थिइन् । मगर समुदायले उदाउँदो बौद्धिक व्यक्तित्वको सूचीमा उनलाई राख्न थालेको थियो ।
मार्टिन चौतारीमा शोधमा संलग्न मित्र झकेन्द्र घर्तीमगरले मनु आइटी पढ्न स्टुडेन्ट भिसामा बेलायत गएको पुस्टि गरेपछि म हतप्रभ भएँ । बेलायत पुगेका विद्यार्थीको बेहाल भएका समाचारका अक्षरहरु पनि घुम्न थाले । सबैलाई त्यस्तो त नहोला तर किन किन एउटा सम्भावनाको पलायन ठानेँ । हुन त विदेशमा ज्ञान आर्जन गरेर देशमै काम गर्न पनि सकिन्छ गरेका पनि छन् । तर किन किन मनु बेलायत गएको समय अलि मिलेन कि जस्तो लागिरह्यो । अरु केही वर्ष नेपालमा उनले लिइरहेको गति निरन्तर गरेको भए उनलाई समाजलाई र देशलाई राम्रो हुन्थ्यो ।
यस्ता कति सम्भावनाहरुको निर्यात भइरहेको छ यसदेशबाट दिनहुँ । आखिर यसमा जिम्मेवार शासन चलाउनेहरु त हुँदैहुन् हामी आफैँ पनि छौँ कि । जे होस् मनुलाई उज्वल भविस्यको शुभकामना ।।।।।।।
Posted by Naresh at 11:59 PM No comments:
त्रिशुलमा उनिएको म
आज आइतबार । मेरो घरमा माइला दाजुको विवाह छ ।बहिनी हिजो रात्री बस चढेर घर पुगिसकी । म भने पुल्चोकको डेरामा तीन तलामाथि बसेको छु त्रिशुलमा उनिएको ध्वजासरह भएर ।
बहराइनबाट एक महिना लामो विदामा नेपाल आएका मेरा माइला दाजु मेरा दाजु मात्र होइनन् एक असल साथी पनि हुन् । उमेरले मभन्दा दुई वर्ष जेठा भए पनि कक्षा आठदेखि हामी पढाइमा पनि सँगै थियौँ । जेठा दाजुको माओवादी जनयुद्धमा लाग्दालाग्दै निधन भएपछि चौपट घरलाई हामी दुईभाइ भएर भरथेग गर्दै आएका छौँ एक अर्कासित सल्लाह गरेरै । एकले अर्काको विचार र योजनाको सम्मान गरेरै ।
पछि साथी बनेका विभिन्न साथीहरुको जन्ती र भोज खान नचुकेको म आफ्नै दाजुको विवाहमा भने गयल भएको छु त्यो पनि आफ्नै मनोगत र आत्मगत कारणहरुले । आफ्नै फोस्रो आडम्बर र मनोमानीले । घरप्रतिको परिवारप्रतिको दाजुप्रतिको र समाजप्रतिको दायित्व बहन गर्न सकिनँ भन्ने गम्भीर पश्चातापले पिरोलिइरहेको छु । दुनियाँलाई लेखेर बोलेर भाषणा गरेर अर्ती उपदेश दिने म आफ्नै दम्भ अहङकार घमन्डका कारण छियाछिया भएको छु ।
पश्चातापको आहालमा चोबलिइरहकै बेला अचानक आमाको फोन आउँछ मावली बाजे सिकिस्त बिरामी हुनुहुन्छ केही दिनदेखि । आवाज बन्द भएको छ रे । अनुहारको एक भाग बाहिरै देखिने गरी कालो भएको छ रे । मामालाई फोन गर्दिएस् है । आमाले भन्नुभयो । २०४२ सालका ताप्लेजुङ जिल्ला पन्चायतका जनपक्षीय उपसभापति महेन्द्र थापामगर मेरा जिबा कहिल्यै आफ्ना कुरामा विचलित थिएनन् । आफ्ना छोरा छोरीसित पनि उनले सम्झौता गरेनन् चाहे उनीहरु घरबाट निस्कीएरै किन नजाउन् । यस्ता कडा मान्छे पनि बिराम लागेपछि थलिएछन् गलेछन् ।
तीन छोरा तीन छोरीका पिता मेरा जिबा उपचार नपाएरै अन्तिम दिन गनिरहेका छन् । धन हुनेको मन छैन मन हुनेको धन छैन । आफ्नै सन्तानहरु उनको अन्तिम संस्कार गर्न पर्खिरहेका जस्ता लाग्छन् । धिक्कार छ ती सन्तानहरुलाई । र मजस्ता नालायक नातिहरुलाई जस्ले केही वर्षदेखि थलिएका जिबाको उपचार गराउन सकेन ।
आजै तनहुँ जानु थियो दिदीको जेठानी दिदी बित्नुभएको १३ दिने शुद्ध्याइँमा । घर परिवार सबैको कर थियो दाजुको विहेमा नआउने भए त्यता भए पनि जा न त । तर मलाई किन हो किन मन छैन । मन वेचैन छ । मैले आफ्नो सानो जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न सकिरहेको छैन । परिवार समाज नातागोताबाट पर पर भागिरहेको आफ्नै छायाँ देख्छु ।
साथीभाइको फोन आउँछ उठाउन मन छैन । अनलाइन भेटिन्छन् साथीभाइ आफन्तहरु । कुरा गर्न मन छैन । कुरा गर्न खोज्नेहरुलाई छिटोछिटो टाटो लगाउँछु । मीना होटलकी मीना दिदी आउँछिन् – भाइ भात खाने होइन । म आफैँ अवाक छु अमन छु । नेपालिपत्रबाट विज्ञान शर्माजी मेल पठाउनुहुन्छ –स्टोरी आजै पठाइदिनुभए हुन्थ्यो । जवाफ दिन मन छैन। नियमित काममा जान खुट्टा लागेको छैन । ढोका बन्द गरेर सुत्न मन लागेको छ । सबैबाट केही क्षणलाइ भए पनि अलग भएर । के म दुनियाँबाट भाग्न सकुँला ।
Posted by Naresh at 11:26 PM No comments:
जनजाति आन्दोलनलाई एकधक्का
लोकतान्त्रिक आन्दोलन २०६२ ६३ पछि सबैभन्दा बढी फस्टाएको आन्दोलन मधेसी आन्दोलन थियो भने त्यसपछिको पंक्तिमा पर्न आउँछ जनजाति आन्दोलन । अध्येताहरुले नेपालमा जनजातिहरुको संगठित विद्रोहको डेढसय वर्ष लामो इतिहास कोट्याए पनि उल्लेख्य उपलब्धि दिलाउन भने २०६२६३ कै आन्दोलन कुर्नुपर्यो । फलतः जनताले आफ्ना लागि आफैँले बनाउने भनिएको संविधान बनाउने ऐतिहासिक संविधानसभामा एकतिहाई जनजाति प्रतिनिधिको उपस्थिति छ ।
संविधानसभामा मौजुद जनजाति सभासद्ले जनजातिका पक्षमा संविधान बनाउन के कस्ता भूमिका निर्वाह गर्लान् त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । जनजाति सभासद्हरुको साझा फोरम बने पनि अहिले क्रियाशील नरहँदा आशा गर्ने ठाउँ त्यति छैन तर विभिन्न जातिले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरु समेतको सहभागितामा खडा गरेका संयुक्त मोर्चाहरु सक्रिय रहिरहेका कारण निराश बन्न पर्ने स्थिति पनि छैन ।
लखन थापाको संगठित विद्रोहसित जोडिने जनजाति आन्दोलनका उपलब्धि एकतिहाई सभासद् निर्वाचित हुनु मात्र होइन । त्यो त एउटा कडी मात्र हो । सरकारले सबै क्षेत्रमा जनजातिका लागि विशेष व्यवस्था गर्नु, राजनीतिक दल लगायत सबै संरचनामा जनजातिको प्रतिनिधित्व गराउन थालिनु निश्चय नै जनजाति आन्दोलनका जग बन्ने प्रक्रिया हो । जनजाति आन्दोलन स्थापित हुँदै जानु हो । भलै यो आन्दोलन जादूको छडीजस्तो निमेषभरमै वा १० महिनामा मानिस जन्मिने शास्वत जस्तै निश्चित समयपछि परिपक्व भएर भएको चाहिँ होइन । यस अवस्थासम्म आइपुग्नुका पछि विभिन्न पाटा र पक्षहरु छन् । ती मध्ये एक महत्वपूर्ण पक्ष हो गोरखा भूतपूर्व सैनिक समुदायको लगानी ।
नेपालमा जनजाति आन्दोलनको थालनी मगर, गुरुंग, राई, लिम्बूबाट भएको पाइन्छ । यी चार जातले गोरखा पल्टनमा पनि नाम कमाएका छन् । पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध लगायतका विभिन्न विभिषिकामा भाग लिएका, अंग्रेजको संगत गरेका, भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलन देखेका, मलाया, ब्रुनाइ, इण्डोनेसिया लगायतका क्षेत्रमा आन्दोलन देखेका र भोगेका गोरखा सैनिकहरुले नेपालमा २००७ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान दिए । आन्दोलन सफल भएपछि यिनीहरुले विभिन्न जातिय संस्थाहरुको स्थापना गरे । भलै त्यतिबेला यी जातीय संगठनहरुको उद्देश्य राजनीतिक थिएन । त्यसो त आन्दोलनको उद्देश्य भनेको समयले निर्धारण गर्छ ।
सात सालको परिवर्तनपछि समाजसुधारका नाममा खुलेका यी जातिय संगठनहरुको नेतृत्वमा पूर्व गोरखा सैनिकहरु नै थिए । गोरखाहरुमा त्यतिबेला दिभागमा चेतना थियो, हातमा पैसा थियो । लाहुरेहरुले भनेको गाउँलेले खान्थे । त्यसो त लाहुरेलाई ऋण पनि जति भन्यो त्यति दिने गाउँघरमा चलन नै थियो । नेपाल मगर संघको संस्थापक संगठन नेपाल लांघाली परिवार संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. हर्षबहादुर बुडादेखि शुरु यो क्रम केही वर्षअघिसम्म जारी थियो । मगर संघमै क्याप्टेन यमबहादुर बुडाथोकी, किरात राई यायोख्यामा कूलबहादुर राई, सुनुवार समाजमा मेजर मानबहादुर सुनुवार, तमु बौद्ध सेवा समितिमा तोरणबहादुर गुरुंग त यसका केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् जसले जातीय संस्थाको नेतृत्व गरे । अहिले पनि लाहुर जाने संस्कार बोकेका प्राय जातिका जातीय संगठनमा गोरखा भूपूहरुको प्रतिनिधित्व छ ।
त्यसो त गोरखा भर्तीको अर्को पक्ष गोरखा आन्दोलनका लागि उर्बर भूमि र नेता तयार गर्नु पनि हो । बाउ लाहुरे छादा पल्टनमै हुर्केर शिक्षा दीक्षा पाएकाहरु धेरैले जनजाति आन्दोलनको बागडोर सम्हाले र अहिले पनि सम्हाल्दै छन् । जनजाति आन्दोलनका सर्वमान्य व्यक्तित्व स्वर्गीय हर्क गुरुंग हुन् कि प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुंग, सुरेश आलेमगर हुन् कि डा. ओम गुरुंग सबैको व्यक्तित्वको जरा गोरखा भर्तीसितै गएर गाँसिन्छ । त्यसो त गोरखा भर्तीले नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई पछाडि पारेको आरोप पनि लगाइन्छ । विगतमा लाखौँ र हज्जारौँको संख्यामा भर्ती लगिँदा त्यसो भएको थियो भन्ने आधार पनि बलियो होला तर वर्तमानमा दुईसयभन्दा कम मात्र लग्ने गरिएको अवस्थामा त्यो तर्क उचित देखिँदैन ।
एनजीओ आइएनजीओ आउनुभन्दा अगाडि नेपालको जनजाति आन्दोलनको आर्थिक स्रोत लाहुरे समुदाय नै थियो । जुनसुकै कार्यक्रम गर्न चाहिले मामुली खर्चदेखि जातीय संगठनको घर बनाउनेसम्मको खर्चको दुईतिहाईभन्दा बढी स्रोत गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरु नै हुन् । अहिले पो एनजीओ आइएनजीओले पैसा खन्याए र ? नत्र त आदिवासी जनजातिहरु सरकारी जागिरमा थिएनन् । बन्द व्यापार थिएन । जातीय संस्थाको दराज, कुर्सि किन्दिनेदेखि विधान, पर्चा छपाइदिने गोरखा भूतपूर्वहरु नै थिए ।
बेलायत सरकारले गत अप्रिल २९ मा सबै गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुलाई बेलायतको आवासीय अधिकार दिने घोषणा गरेपछि त्यसको असर जनजाति आन्दोलनमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा पर्ने देखिन्छ । एक त जातीय संस्थाको बागडोर सम्हालिरहेका, विभन्न पदमा रहेर काम गरिरहेका गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरु प्रवासिँदा प्रत्यक्ष असर नै पर्नेछ । अर्कोतर्फ उनीहरुबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहायता लगायतले जनजाति आन्दोलनलाई फेरि कमजोर बनाउने छ । बेलायत सरकारको नीतिबाट लाभ हासिल गर्ने करिब डेढलाख गोरखा र उनका परिवारजन्मध्ये दुईतिहाई आदिवासी जनजाति समुदायभित्रबाट पर्नेछन् ।
तथापि बेलायत सरकारको नयाँ नीतिबाट जनजाति आन्दोलनमा पर्ने असरका बारेमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले गम्भीर रुपमा सोच्न जरुरी ठानेको देखिँदैन । शायद महासंघका वर्तमान अध्यक्ष लाहुर जाने संस्कार भएका जातिका नभएकाले हुनसक्छ । बेलैमा नसोच्ने हो भने जनजाति आन्दोलनलाई एकाएक झट्का पर्नसक्छ । त्यसो त गोरखा समुदायको पलायनले जनजाति आन्दोलन मात्र होइन सिंगो देशलाई आर्थिक र सामाजिक रुपमा गम्भीर असरहरु पर्ने पनि निश्चित छ । त्यतातर्फ पनि सबैले सोचून ।
अमेरिकाको नेपाली खबरमा प्रकाशित
Posted by Naresh at 10:31 PM No comments:
कस्तो होला नेपालको नयाँ पहिचान ?
संविधानसभाको संवैधानिक समितिले दशैाअघि राष्ट्रिय चिन्हहरुमाथि बहस शुरु गरेपछि विभिन्न पाटा र पक्षहरुबाट विभिन्न खाले प्रतिक्रियाहरु व्यक्त भइरहेका छन् । जनमतबाट अनुमोदित भएर नयाँ संविधान निर्माणको अधिकार पाएको संविधानसभाले शुरु गरेको यस बहसमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक पक्ष हाबी भइरहेको छ । राष्ट्रिय चिन्हरु आकाशका चन्द्रसूर्य जस्तै अपरिवर्तनीय र अटल हुन् भनेर बहसको मुखमा पट्टी बाँध्न खोजिँदैछ । अर्कोतिर संविधानसभाले गर्नुपर्ने काम नगरेर औचित्य नै नभएको विषयमा ध्यान केन्द्रीत गरेको आरोप पनि लगाउन थालिएको छ ।
१० वर्षको सशस्त्र युद्ध, १९ दिने लोकतान्त्रिक आन्दोलन, आदिवासी जनजाति र मधेस आन्दोलनको उपलब्धिस्वरुप देशमा संविधानसभा प्राप्त भएको छ । विगतमा मुठ्ठीभर केही व्यक्तिहरुले जिम्मा लिएर बनाइने र राजाहरुबाट जनतालाई संविधान बक्स हुने गरेकोमा अहिले जननिर्वाचित प्रतिनिधिको हातबाट बल्ल लेख्न अवसर मिलेको छ । अर्को अर्थमा जनताले आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने अवसर हो यो । एकजुगमा एक दिन आउने संज्ञा दिइएको संविधानसभाले अहिले सोचे अनुरुप काम गर्न नसके पनि नयाँ संविधान लेखनको आफ्नो मूल लक्ष्यलाई तिलाञ्जलि दिइसकेको छैन । ढिलै सही नयाँ संविधान यात्रामा गति अगाडि बढाइरहेकै छ । विभिन्न समितिहरुले आफ्ना प्रतिवेदनहरु संविधानसभासमक्ष बुझाइरहेका छन्, कति छलफलका चरणमा छन् । संविधानसभालाई नयाँ संविधानमा राखिने जस्तोसुकै र जुनसुकै प्रावधानहरुका बारेमा छलफल चलाउन र निर्णय गर्न पूर्ण अधिकार छ । यसअघिका संविधानहरुमा जस्तो दरबार, राजा, राजपरिवार अहिले संविधानभन्दा माथि छैनन् सर्वाधिकार जनतामा छ । कुनै पनि विषयमा बहस छलफल नचलाउने भन्नेजस्ता अधिकारबन्देज संविधानसभालाई छैन । तर संविधानसभाले आफ्नो छलफल अगाडि बढाइरहँदा किन सकारात्मक विचारहरु आउन सकिरहेका छैनन् ?
नेपालका राष्ट्रिय चिन्हरु, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय जनावर, राष्ट्रिय पंक्षी, राष्ट्रिय रङ, राष्ट्रिय फूलले परिवर्तित अवस्थामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने विषय संवैधानिक समितिले अहिले उठाएको बहसको चूरो हो । नेपालले २०११ सालदेखि चन्द्र सूर्य अंकित तीन चोसे झण्डालाई राष्ट्रिय झण्डा, गाईलाई राष्ट्रिय जनावर, डाँफेलाई राष्ट्रिय पंक्षी, सिम्रिकलाई राष्ट्रिय रंग र लालीगुराँसलाई राष्ट्रिय फूल मान्दै आएको छ । यी चिन्हहरुको चयन कुनै लोकतान्त्रिक विधि वा जनताको जनमतबाट भन्दा पनि तत्कालीन राजा महेन्द्रको हुकुमबाट भएको इतिहास साक्षी छ । तीस वर्षे पञ्चायत र त्यसपछि पनि अपरिवर्तित रहेका ती चिन्हहरुप्रति लामो समयसम्म अपनाइएका कारण सर्वसाधारणको केही ध्यान खिचिएको हुनसक्छ तर जनमानसले आफ्नो मनमस्तिस्कबाट हटाउनै नसक्नेगरी अमिट छाप बनेर बसेका भने अवश्यै होइनन् । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने अहिले ती चिन्हहरुलाई परिवर्तन गर्ने कि भनेर कसले हिम्मत गर्थ्यो ? आखिर जनता चिढ्याउन त कुन राजनीतिक पार्टी चाहन्छ र ?
यी चिन्हहरुलाई राष्ट्रिय चिन्ह बनाउन विगतमा जसले सल्लाह र दबाब दिएका थिए त्यही समुदाय र शक्ति अहिले राष्ट्रिय चिन्ह परिवर्तनको बहसलाई निरर्थक र बेतुकको बनाउन खोज्दैछ । आफूलाई संस्कृतिविद्, इतिहासविद्, राष्ट्रप्रेमी भनाउन रुचाउनेहरु जो पशुपतिमा भारतीय पुजारी हुनुपर्छ भनेर चिच्याउँछन् तिनीहरु नै अहिले यस बहसलाई राष्ट्रिय चिन्ह फेर्नु भनेको बाउआमा फेर्नुसरह हो’ देश टुक्रयाउने खेल हो’ भनेर कुर्लिरहेका छन् । २३८ वर्षदेखि जग हालेर प्रत्यक्ष शासनसत्तामा बसेको राजतन्त्रको समाप्तिमा मुलुकका केही प्रक्रियामा गडबडी आउनसक्ने भनेर आवाज निकाल्न नसक्नेहरुले करिब ५० यता कागजमा स्थापित आवाजविहीन र निर्जीव यी चिन्हहरु फेर्दा देशै विखण्डन हुने तर्क गर्नु पनि आफैामा हाँस्यास्पद छ ।
वास्तवमा यी चिन्हहरुको बहसलाई दुई तरिकाले उठाइएको देखिन्छ । पहिलो कारण हो राष्ट्रिय चिन्ह परिवर्तनको बहस एकीकृत नेकपा -माओवादी) बाट थालनी गरिनु । संविधानसभा निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल भए पछि नै माओवादीप्रति अन्य प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरु आत्तिएका छन् र एकोहोरो खनिएका छन् । माओवादीको एजेण्डा पारित भएमा आफूहरु जनताबाट विस्थापित हुने डरले अन्य राजनीतिक पार्टीहरु बरु पुराना कुरालाई हुबहु र यथावत राख्न तयार छन् तर केही कुरा पनि परिवर्तन गर्न चाहँदैनन् । चाहे त्यो पशुपतिमा नयाँ पुजारी नियुक्तिको कुरा होस् या न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको कुरा होस् । त्यसकारण राष्ट्रिय चिन्हहरु परिवर्तनको विषय माओवादीले उठाएकै कारण यो बहसलाई नकारात्मक कोणबाट हेरिँदैछ । र, चर्को राष्ट्रवादको पगरी लगाइदिएर चर्काउन खोजिँदैछ । काँग्रेस, एमालेले यो विषय उठाएको भए पनि यो विषयलाई बहसभन्दा विवाद बनाइँदैनथ्यो ।
दोस्रो, नेपालको परिवर्तनतर्फको यात्रालाई विश्वभरका हिन्दू अतिवादीहरुले रोक्न खोजिरहेका छन् चाहे त्यो पशुपतिमा नेपाली पुजारी राख्ने विषयमा होस् या धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा गर्ने क्रममा होस् । धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा गर्नबाट रोक्न उनीहरु असफल भए पनि पशुपतिमा भारतीय पुजारी राखिराख्न भने उनीहरु सफल भएका छन् । शायद जनआन्दोलन लगत्तै धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा नगरिएको भए अहिले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन सम्भव थिएन र, जनआन्दोलन लगत्तै पशुपतिमा नेपाली पुजारी राख्ने निर्णय गरिएको भए त्यसलाई कसैले रोक्नसक्ने थिएन । जनआन्दोलनका बेला सिथिल हुने र अहिले समय बित्दै जाँदा संगठित हुने त्यो शक्तिको सम्बन्ध प्रत्यक्षरुपमा दरबारसित गाँसिएको छ । तिनै दरबारियाहरु अहिले अनेक वेशमा विरोधी श्वर लिएर प्रकट भइरहेका छन् । राजनीतिक दलहरुबीचको बेमेललाई हतियार बनाएर फाइदा लुट्न पनि सक्षम भइरहेका छन् ।
देशभित्रका राष्ट्रवादी हिन्दूहरु अन्यायमा परिरहेका छन् र विदेशीको इशारामा चल्ने कथित हिन्दूहरुको नै बोलबाला बढिरहेको छ । अहिले राष्ट्रिय चिन्हको बहसमा पनि तिनै विदेशी हिन्दूहरु अगाडि आएका छन् । नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य बनाउन नसके पनि राष्ट्रिय चिन्हहरुमा हिन्दूत्व कायम राख्न खोजिरहेका छन् । राष्ट्रिय चिन्हले कुनै न कुनैरुपमा हिन्दू धर्मको पहिचान बोकिरहोस् भन्ने चाहन्छन् । राष्ट्रिय चिन्हले विश्वसामू मुलुकको एकता र पहिचान बोक्नुपर्छ । तर हिन्दू अतिवादीहरु यी चिन्हले केवल हिन्दू धर्मको पहिचान बोके पुग्छ भन्ठान्छन् । होइन भने मुलुक धर्म निरपेक्ष भइसकेपछि गाईलाई राष्ट्रिय जनावर तोकिइरहनुपर्ने कारण के छ ? सिम्रिकलाई राष्ट्रिय रङ मानिरहनुपर्ने कारण के छ ? दुधालु, गुनिलो मात्र कारणले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मान्ने हो भने गाईभन्दा गुनिलो र धेरै दुध दिने धेरै जनावरहरु छन् तिनीहरुलाई मानिनुपर्ने होइन र ?
विश्वका प्राय सबै देशले आफ्नो देशमा पाइने दुर्लभ जनावरलाई राष्ट्रिय जनावर, दुर्लभ पन्छीलाई राष्ट्रिय पन्छी, दुर्लभ बनस्पतिलाई राष्ट्रिय फूल मान्ने गरेका छन् । प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण हाम्रो देश नेपालमा पनि अन्यत्र नपाइने धेरै यस्ता विशेषताहरु छन् जसले नेपाललाई विश्वसामू चिनाइरहेका छन् । हामीसित विश्वमा दुर्लभ एकसिँगे गैँडा छ, नेपालमा मात्र पाइने चरा काँडे भ्याकुर छ, वनस्पतिहरु फूलहरु त नेपालमा मात्र पाइने कति छन् कति ? यदि ती मौलिक र दुर्लभ हाम्रा सम्पत्तिलाई राष्ट्रिय चिन्ह बनाउन सकियो भने नेपालको पहिचान त हुने नै भयो ती सम्पत्तिको संरक्षण र सम्बर्द्धन पनि हुनसक्ने थियो । दुर्लभ वस्तुहरुलाई नियाल्न, अध्ययन गर्न चाहनेहरुका कारण नेपालको आर्थिक उपार्जनमा पनि सहयोग नै मिल्ने थियो । तर विरोध सुन्नपर्छ भनेर मनमा लागेको कुरा पनि व्यक्त गर्न नसक्ने प्रवृत्तिका नेपालीहरुले नयाँ राष्ट्रिय पहिचानलाई स्थापित गराउन सक्लान् ?
मलेसियाको नेपाली खबरमा प्रकाशित
Posted by Naresh at 10:11 PM No comments:
सम्झेर ती दिनहरु
संघमा लाग्दा जागिर खुस्कियो
२०५६ मंसिरमा काठमाडौँको कुलेश्वरस्थित भिनाजुको सिनिक फोटो स्टूडियोमा काम गर्दै पढ्दै थिएँ । नेपाल मगर विद्यार्थी संघको दोस्रो महाधिवेसन -२०५६ मंसिर २४,२५ र २६) मा हुने जानकारी पाएपछि झापामा रहेका दाइ विष्णु खपांगीलाई प्रतिनिधि बन्ने ब्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेँ । भिनाजुलाई एक महिनाअघि नै मंसिरको २४ गते घर जाने जानकारी गराइसकेको थिएँ -महाधिवेसनमा जाने भनेको भए अनुमति नदिन सक्थे) । मंसिर २४ गते महाधिवेसन उदघाटन भयो, सोही साँझ भिनाजुसित भोलि घर जाने स्मरण गराएँ । उनले साहुजीको सक्कलीरुप रवाफ देखाए । म पनि के कम, साथीहरुसित खर्च सापटी काढेर २५ गते बिहानै बन्दसत्रस्थल त्रिविवि कीर्तिपुर पुगेँ । महाधिवेसनमा सम्पन्न भएपछि दाइसित घर -झापा) गएँ । भिनाजुले घरबाट फर्कनअघि एकपटक फोन गर्न भनेका थिए । गरेँ, स्टूडियोमा मेरो आवश्यकता नभएको उनले जानकारी गराए । मगर विद्यार्थी संघप्रतिको आशक्तिले पहिलोपटक पाएको बेतलवी जागिर खुस्क्यो ।
भोको पेटमा समाज बदल्ने सपना
२०६१ सालतिर हुनुपर्छ मगर विद्यार्थी संघका तत्कालिन महासचिव भूपेन्द्र पुलामी र म धनकुटा र इलामको कार्यक्रमका लागि प्रस्थान गर्यौँ । कहिले मैले, कहिले उनले लागेको खर्च गर्दै गयौँ । बस भाडा, खाना, खाजा खर्च तिर्दै आयौँ । कार्यक्रममा आउनजान कति खर्च लाग्छ सगोलमा हिसाब भए पनि कोसित कति पैसा छ भन्ने हिसाब गरेका थिएनौँ । इलाममा कार्यक्रम सकेर बस चढेदेखि मसित जम्माजम्मी पचास रुपियाँ पनि बचेन । म ठान्थेँ उनीसित पैसा बचेको होला । उनीसित पनि पैसा सकिएको रहेछ उनले पनि ठान्दा रहेछन् मसित पैसा बचेको होला ।
बेलुकी भात खाने बेला आयो । आफूसित पैसा नभएपछि सकसक भयो । मैले मुख फोरेँ, के खाने सर मसित त पैसा सकियो सरसित कति छ ? उनले पनि गोजी टक्टक्याएर भने, मसित पनि पैसा सकियो सर । दुईजनाको गोजी टक्टक्याउँदा करिब ५० रुपियाँ जम्मा भयो । राजमार्गको छेउमा ठडिएको पसलमा उमालेको चाउचाउ आधा पेट खाएर मगर जातिको मुक्तिको मीठो सपना देख्यौँ ।
पैसा नभएर प्लेन चढियो
२०६० को वैशाखमा पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा मगर विद्यार्थी संघको प्रशिक्षण कार्यक्रम राखिएको थियो । काठमाडौँबाट अध्यक्ष झकेन्द्र घर्ती र म गयौँ, डा. केशरजंग बराल पोखरामै थिए । प्रशिक्षण सकियो । भोलिपल्ट नेपाल बन्द थियो । पोखरा, बगरबाट तातो पीच सडक नाप्दै नेपाल मगर संघका हालका अध्यक्ष झकबहादुर थापाको घर पार्दी गएर बस्यौँ । काठमाडौँबाट छुट्दा मसित ५०० रुपियाँ थियो, झकेन्द्रसित त्यस्तै ५०० जति थियो होला । मेरो पैसा बस भाडा ठिक्क । खाना खर्च तिर्दा उनीसित पनि आधाउधी जति बच्यो होला ।
साथमा पैसा नभएकोले र्फकँदा प्लेनमा फर्कने व्यवस्था गरेका थियौँ किनकि त्यतिबेला मगर विद्यार्थी संघको मुखपत्र लीसारमा -शाही) नेपाल वायुसेवा निगमको विज्ञापन छापेवापत टिकट पाइन्थ्यो । रात पार्दीमा गुजारेर बिहान केन्द्रीय सदस्य प्रेम थापालाई भेट्न महतगौँडा गयौँ । कुखुरा फार्म चलाएर बसेका थापाले बिहानको भान्सा गराए । फर्कने बेला भयो, पैसा जम्माजम्मी २५० रुपियाँ बाँकी रहेछ । प्लेन टिकट सित्तैमा पाइए पनि एयरपोर्ट ट्याक्स तिर्नुपर्ने थियो । पहिलोपटक धर्ती छोड्न लागेका हामी दुई मनुवालाई त्यो ट्याक्स कति लाग्छ थाहा थिएन ।
झकबहादुर थापासित केही पैसा सापट माग्नुपर्ला भनेर झकेन्द्रजीले भन्नुभयो । तर घर पुग्दा थापा बाहिर गइसकेका रहेछन् । म्याडमलाई माग्न असजिलो लाग्यो । के गर्ने, अरु उपाय थिएन । जे होला भनेर विमानस्थल छिर्यौँ । धन्न त्यतिबेला एयरपोर्ट ट्याक्स जनही ११५ रुपियाँ रहेछ । दुईभाइसित बचेको २५० रुपियाँले एयरपोर्ट ट्याक्स मात्र तिर्न पुगेन कि त्रिभुवन विमानस्थल गेटबाट प्रतिव्यक्ति १०/१० रुपियाँ भाडा तिरेर आआफ्नो घर पनि पुग्यौँ ।
बालबाल फुटबाट जोगियो
संकटकालको महाकालरात्रीमा नेपाल मगर विद्यार्थी संघको महाधिवेसन बुटवलमा तोकियो । देशको परिस्थिति झन् जटिल हुँदै जाँदा बुटवलमा महाधिवेसन त केन्द्रीय समितिको बैठक समेत बस्न नसक्ने अवस्था आयो । अध्यक्ष झकेन्द्र घर्तीलाई काठमाडौँमै सुरक्षाकर्मीले निगरानी राखेर हैरान पारेका थिए । महाधिवेसन गर्न एकवर्ष ढिला भइसकेको थियो । सबै तथ्यलाई विश्लेषण गरेर महाधिवेसन काठमाडौँ सारियो ।
बुटवलबाट काठमाडौँ महाधिवेसन सारिएकोमा तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रकाश राना, केन्द्रीय सदस्य टेकबहादुर मास्की रानाको अगुवाईमा विरोध मात्र भएन । महाधिवेसन बुटवलमै हुने प्रचारबाजी समेत पत्रपत्रिकामार्फत गरियो । अलगअलग दुईवटा महाधिवेसन हुने समाचार पत्रपत्रिकामा आउन थालेपछि तत्कालीन महासचिव भूपेन्द्र पुलामी, सचिव भोजविक्रम बुढा र म रहेको ट्रोइका वार्ताका लागि बुटवल प्रस्थान गर्यो । बिहानैदेखि वार्ता गरौँ भनेर टेकबहादुर र प्रकाशलाई फोन गर्दा हैरान भइयो । टेकबहादुर आए, आफ्ना कुरा राखे गए तर प्रकाशले आउँछु आउँछु भन्दै हामीलाई दिनभर कुराए मात्र ।
दिनभर न्यू इरा होटलमा सुतेर कटायौँ । साँझ करिब ५ बजे नेपाल मगर संघका तत्कालीन अध्यक्ष क्याप्टेन यमबहादुर बुढाथोकीको पहलमा मगर संघका राष्ट्रिय पार्षद केशव सूर्यवंशीसित भेट भयो । उनैले पहल गरेपछि प्रकाश छ बजेतिर वार्तामा आए । लामो छलफलपछि लुम्बिनी र बाग्मतिका अगुवा कार्यकर्ता, केन्द्रीय सदस्यहरु तथा पार्षदहरुको बैठक राख्ने र सो बैठकको निर्णय सबैले मान्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भयो ।
महाधिवेसनको दुईसाता अघि मंसिर २६ गते नारायणघाटमा बसेको संयुक्त बैठकले काठमाडौँमा, पहिले तोकिएकै समयमा महाधिवेसन गर्ने निर्णय गरेपछि मगर विद्यार्थी संघ फुट्नबाट बालबाल जोगियो ।
नेपाल मगर विद्यार्थि संघ काठमाडौँ जिल्ला समितिको मुखपत्र छलांगमा छापिएको
Posted by Naresh at 10:10 PM No comments:
बुधबार माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद चौथो किस्तामा विस्तार भयो । विहीबारका क वर्गका नेपाली दैनिक पत्रिकाले लेखे चौथो किस्तामा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार अधूरै ।
गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका मित्र रामकुमार बस्नेतलाई हरेक महिनाको १ गतेदेखि ४ गतेसम्म बोल्न पनि फुर्सद हुँदैन । सहकारीबाट सेवा लिएका सेवाग्राहीबाट मासिक किस्ता संकलन गर्नुपर्ने कारणले । डेस्कटप कम्प्युटरको एकवर्षे किस्ता चुक्ता गरिसकेको म अहिले पनि डिजिटल क्यामेराको किस्ता चुकाउँदै छु । उता, ल्यापटप किन्दा संस्थानबाट लिएको सापटीको किस्ता बुझाउँदा आफ्नो मासिक बजेट नै ढलपल हुन खोज्छ ।
संस्थानमा धेरै साथीहरु छन् जो मोटरबाइकको किस्ता तिर्दै छन् । बेलाबखत भेटिएका लाहुरे मामाहरु हरेक अंग्रेजी महिनाको शुरुको साता पेन्सन बुझ्दै गाडीको किस्ता बुझाइरहेको देख्छु । स्तर नमिले पनि साथी बनेका एक दुई जना चिकित्सक र इन्जिनियर साथीहरु फ्ल्याटको किस्ताको कुरा बेलाबखत सोध्नै नपरीकन ओकल्छन् ।
केहीवर्ष अगाडि पत्रपत्रिकामा विज्ञापन छापिने गर्दथ्यो आइरनदेखि गाडीसम्म किस्ताबन्दीमा । आजकल त्यस्तो एकमुष्ट विज्ञापन नदेखेको त धेरै भयो । तर गुण कोअपरेटिभले चाहिा केही महिना अगाडिसम्म किस्ताबन्दीमा मोबाइल सेट दिने विज्ञापन गर्दै आएको थियो ।
हुन पनि किस्ताबन्दीको सुविधा कहाँसम्म छैन ? मोवाइल सेट, आइरन, टेलिभिजन, डिभिडी, क्यामेरा, फर्निचर, मोटरसाइकल, गाडी, घर, हवाइजहाज के चाहियो ? सबै किस्ताबन्दीमा उपलब्ध छन् । यी त सुनिएकै बुझिएकै थियो तर सरकारसमेत किस्ताबन्दीमा बन्न थालेपछि किस्ताबन्दीको महिमा चुलिएको विश्लेषण मनमनै गर्दैथिएँ । गोरखापत्रको फीचर शाखाका सहकर्मी दाइ कमल रिजालले सुनाउनुभयो - हुँदाहुँदा अब त घर बनाउने डकर्मीले पनि किस्ताबन्दीमा काम गर्न थाले, आज आयो अनि एक सातापछि ।
अर्कोतिर बसेर लेख सम्पादन गरिरहेका दाइ निर्मलकुमार आचार्यले मौनता तोड्दै भन्नुभयो - त्यतिसम्म किस्ताबन्दी त ठिकै हो तर यो क्रम बढ्दै गएर हजामसम्म पुग्यो भने चाहिँ कस्तो होला ???
Posted by Naresh at 9:47 PM 1 comment:
बोक्सी उत्रेको साक्षी
राजधानीको एक गाउँमा शिक्षिका विमला लामाले कल्लीकुमारी विश्वकर्मालाई बोक्सीको पगरी गुथाउँदै दिशा खुवाएको घटनापछि मनमा एउटा तीखो बोक्सी काँडा पस्यो - आखिर शिक्षकजस्तो गाउँका अशिक्षित, अर्धशिक्षित, अर्धदीक्षितहरुलाई अन्धविश्वासबाट वैज्ञानिक बाटो देखाउनुपर्ने विमलाले किन यस्तो गरिन् ? जेठ २६ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा एउटा लेख छापियो - महिला हिँसा गर्नेमा शिक्षितहरु अगाडि । जेठ २८ को नागरिक दैनिकमा विमलाले बोक्सीको आरोप लगाउनु आफ्नो गल्ती स्वीकारिन् । खाटा बसिसकेको तर खिल निस्किनसकेको बोक्सी काँडाको घाउ यी सन्दर्भले अझ चस्कायो ।
२०५४/५६ को आधावर्ष तेह्रथुम, आठराईको इवामा बिताउने अवसर यो ब्लगरले पाएको थियो । माइली फूपूको आँगनसँगै जोडिएको थियो उहाँको जेठाजुको घर । फूपूकी जेठानी दिदी बारम्बार बिरामी हुने गर्दथिन् । कहिले कोखामा घोच्यो । कहिले सोला हान्यो । कहिले के कहिले के ? पाँच छोरा, एक छोरीकी आमा उनी एक सातामा दुईपटक बिसञ्चो भएको हुँदा छोरा छोरी त माउ बिनाको चल्ला जस्तै भइएला कि भनी पिरोलिन्थे । त्यो भन्दा पनि चिन्ता त उनका श्रीमानमा छाउँथ्यो ।
एक छोरा एक छोरी एसएलसी पास गरेका भए पनि जब उनी बिरामी हुन्थिन् उनलाई न त स्वास्थ्य चौकी लगिँदैन्थ्यो । न त खुवाइन्थ्यो कुनै औषधिमूलो नै । त्यसो त स्वास्थ्य चौकी पनि पायकमा भने थिएन । जब उनी बिरामी हुन्थिन् घरमा आउँथे चुहान कान्छा जो गाउँका थोरबहुत कहलिएका धामी थिए । चुहान कान्छाले विभिन्न जातिका मसानको नाम पुकार्दै जान्थे, उनी बिस्तारै काम्न थाल्थिन् । तीव्र गतिमा काम्दै जाँदा अनुहार उनको भए पनि आवाज र हाउभाउ अर्कैको आउँथ्यो । म फौदे झाँक्री हुँ । मलाई लैनो भैँसी देऊ । मलाई तिल्के बोको देऊ’ उनले फलाक्ने भाषा यस्तै हुन्थ्यो ।
उनको बक सुनेपछि उनका श्रीमान् उनले लिएको नामप्रति यति आक्रोशीत हुन्थे उनमा धैर्यताको सीमा बाँध्न मुस्किल हुन्थ्यो । गाउँले शब्दमा बक उत्रेपछि बर्बराइरहेका श्रीमती चाहिँ आफ्ना श्रीमानलाई भन्थिन् - ए दीपकका बा राति हुँदो किन यसरी कराको । श्रीमान चाहिँले अहिले तैाले के भनेको थिइस्’ भन्दा उनी हँ, मैले कहिले के भनेा र ?’ भन्दै उल्टै जिज्ञासा पो गर्थिन् ।
यस्तैमा एकदिन बक सुनेपछि श्रीमान् खपिनसक्नु रिसाए । ए दीपक ले खुकुरी । आज म फौदेलाई छाड्दिनँ । कति दुःख खेप्नु मैले ? एक दिन होइन दुई दिन होइन’ भन्दै बुढा त खुकुरी बोकेर फौदे झाँक्रीको घरतिर फटाफट उक्लिन लागे । अब परेन फसाद । रिसको झोँकमा कतै बुढाले फौदेलाई हान्दिने पो हुन् कि अथवा आफ्नो रक्षा गर्न फौदेले नै हान्ने हो कि ? हत्त न पत्त हामी तीनभाइ लाठेले बुढालाई झ्याइँकुटी बनाएर घर फर्कायौँ ।
मैले मेरो जहान निको पार्न के गरिनँ । हल गोरु बेचेँ । लैनो भैँसी बेचेँ । खसी, बाख्रा, कुखुरा नाथे त कति हो कत्ति । मेरो फलाना ठाउँको खलाखेत नै गयो । ल भन त भदै मैले अब कति सम्झिएर बस्ने ?’ बुढाको बोलीमा अन्तरआत्माको चित्कार थियो ।
सोचेँ, अहिले पनि सोच्छु -वास्तवमा भइरहेको के हो ? वास्तवमै बोक्सा-बोक्सी हुन्छन् ? अथवा त्यो धामीको खाने मेसो मात्र हो ? यदि त्यसो हो भने फौदे झाँक्रीकै जस्तो आवाज कसरी निस्क्यो ?
यस्ता घटना नेपालका चारहजार गाउँघरमा कति होलान् कति ? यसरी जनमानसमा बलियो जरो गाडेको अन्धविश्वासको पर्खाल कानुनको डण्डाले मात्र भत्काउन सकिएला ?
चश्मा नभएको भए
लालपानी माध्यमिक विद्यालय, शिवगञ्जमा कक्षा ७ पढ्दाको कुरा हो । चश्मा लाएर कक्षामा आएको निहुँमा सहपाठी कृष्णप्रसाद उप्रेतीको गालामा एकाएक शिक्षक रत्नमान श्रेष्ठले चड्कन लगाए । कुन अभियोगमा चड्कन लगाइयो केही थाहा भएन । रत्न सरले भुटभुटिँदै यति मात्र भने - ‘खुब हिरो बनेर कक्षामा आउने’ ।
भोलिपल्टसम्ममा त्यो चड्कन रत्नसरका लागि महंगो साबित भइसकेको थियो । आँखाको समस्याका कारण चिकित्सकले चश्मा लगाउन दिएको प्रेसक्रिप्सन देखाएपछि रत्नसरलाई विद्यार्थीको गालामा बर्साएको त्यो आफ्नै गालामा बजि्रए झैँ भयो । ‘उपकारी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर’ भन्ने कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको पंक्ति पछ्याउँदै होला रत्नसरले विद्यार्थीसित माफी मागे ।
बालखैमा आफ्नै सामुन्ने देखेको यो घटनापछि चश्माबाट बाह्र हात परै रहनु पर्नेरहेछ भन्ने पाठ सिकियो । घरमा जिबा (हजुरबा) ले पढ्दा लगाउने चश्मा पनि छुनु नहुनेरहेछ भन्ने लाग्यो । लाग्यो, ठूल्दाइले बेलाबखत लगाउने कालो चश्मा पनि दाइ नभएको मौका छोपेर लगाउनु ठीक हैन रै’छ ।
२०५६ मा रत्नराज्यलक्ष्मी कलेज भर्ना भएपछि सोचेको थिएँ -विज्ञान पनि पढ्न नपाए पनि मेजर म्याथ (गणित) लिएर पढुँ । एक सातासम्म गणित कक्षामा धाउँदा शिक्षकले कालोपाटीमा लेखेको ठम्याउनै नसकेपछि गणितको सपना आधाबाटोमै तु्हियो । यसबीचमा दिदी भेनाको फोटो स्टूडियोमा फोटोग्राफर बन्दा कैयौँचोटी फोकस आउट फोटो खिचियो र गालीको सगरमाथा पनि बेहोरियो ।
२०५७ मा कम्प्युटर सिक्न पाटनढोकास्थित कम्प्युटर सेक्सन धाउँदा पुष्टि भो मेरो आँखाको ज्योति त आंशिक कमजोर भइसकेको रहेछ । सहपाठी बहिनी मन्दिरा शाक्यले सल्लाह दिइन् - दाइ तपाईको त आँखा कमजोर भइसकेछ । डा. नारायणी श्रेष्ठसित जचाउँदा नतीजा निस्क्यो - मैले माइनस १.५ पावरको चश्मा लाउनुपर्ने रहेछ । समय बितिसकेपछि अब पो घोत्लिन मन लाग्यो - मेरो आँखा किन कमजोर भयो ? फोटो स्टूडियोको डार्करुममा बसेर काम गर्नाले कि रातभर कम्प्युटरमा गेम खेल्नाले ?
चश्मा बिनाको जीन्दगीको कल्पना गर्न छाडेको धेरै वर्षपछि यो साता केही साथीहरुले प्रश्न गरे - तपाईको चश्मामा पावर पनि छ ? सुत्दा आठ घण्टाबाहेक नौ वर्षयता चश्मा छाड्न सकेकै होइन । तैपनि प्रश्न चाहिँ अर्कै कोणबाट तेर्सियो । एक मन लाग्यो ‘हैन, पावर छैन । मैले नक्कल पार्न मात्र चश्मा लगाको’ भन्दिऊँ कि । कसैले टाउकोमा, कसैले छातीमा, कसैले कम्मरमा चश्मा लाएको छ्यास्सछ्यास्ती देखेका ती साथीहरुले मलाई त्यस्तो प्रश्न सोध्नु अस्वाभाविक पनि हैन भन्ने लाग्यो ।
छलाङ मार्ने गरी बढिरहेको चश्माको पावरका कारण तीनमिटर परको अक्षर ठम्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको म बेलाबेलामा सोच्छु - आखिर यो चश्माको आविस्कार कसले गर्‍यो होला ? जसका कारण मेरो जीवन जेनतेन घसि्रइरहेको छ । जसोतसो धानिइरहेको छु । यदि चश्मा नहुँदो हो त ? कल्पना मात्र गर्दा पनि कहाली लाग्छ - म घरको कुनै कुनामा थुपि्ररहेको हुन्थेँ होला । जीवन र जगतलाई चर्मचक्षुले स्पर्श गर्नबाट वञ्चित हुन्थेँहोला । अथवा मेरो देखभालका लागि अर्को एकजनाको पनि जीवन त्यतिकै बित्ने थियो होला ।
धन्य छ, चश्मा तिमीलाई कसले आविस्कार गर्‍यो ? जसका कारण आज म र मजस्ता धेरै मानिसले जीवन र जगतलाई भौतिकरुपमा नियाल्न पाएका छन्
Posted by Naresh at 10:28 PM No comments:
नचाहँदा नचाहँदै बनेका हिरो
त्यसो त सगरमाथाको चुचुरो छुने आप्पा शेर्पाको कुनै धोको होइन । अझ कीर्तिमान बनाउने त उनले सपनामा पनि चिताएका थिएनन् । धेरैको जीवन सगरमाथाको टुप्पो त के फेदीसम्म पनि नटेकी बित्छ । तर आप्पा शेर्पा, जसले उद्देश्य नराखिकनै सगरमाथा आरोहणमा एकपछि अर्को कीर्तिमान बनाएका छन् ।
बिहीबार बिहान ८ बजे सगरमाथाको चुचुरोमा 'जलवायु परिवर्तन रोक, हिमालयलाई बाँच्न देऊ' अंकित व्यानर फहराउँदै आप्पाले आफूलाई १९ औँपटक विश्वको सबैभन्दा अग्लो भूगोलमा पुर्‍याए । १३ महिनाअघि आफैँले कायम गरेको सबैभन्दा बढीपटक सगरमाथा चढ्ने मानवको कीर्तिमान आफैँले तोडे ।
थामे, सोलुखुम्बुका ४९ वषर्ीय आप्पा १२ वर्षको छँदा आफ्ना गोठाला पिताको निधन भएपछि परिवार पाल्न पर्वतारोहण पेशामा लागेका हुन् । पिताको मृत्युपछि आमा इलाफुटी, दुई दिदी र दुई भाइको जिम्मेवारी लाक्पा तेञ्जिङको थाप्लोमा आइपर्‍यो । भरियाका रुपमा यस पेशामा लागेका आप्पाले एकजना डेनिस समाजसेवीको मद्दतले सोलुकै हिमालयन ट्रस्ट स्कुलमा भर्ना भए । तर दुई बर्ष नबित्दै पर्वतारोहणले आप्पालाई तानिहाल्यो ।
आप्पाले १९८८ मा पहिलोपटक सगरमाथा आरोहण शुरु गरे । तर उनी ८ हजार ५०० मिटरभन्दा माथि जान सकेनन् । विगत केही वर्षयता कीर्तिमानमाथि कीर्तिमानको भारी बोकिरहेका आप्पाको शुरुका तीन आरोहण प्रयास विफल भएका थिए । सन् १९९० मे १० मा उनले रोब हल, ग्यारी बल र एडमण्ड हिलारीका नाति पिटर हिलारीसित पहिलोपटक सगरमाथाको आरोहण आरम्भ गरेका थिए ।
त्यसपछिका वर्षहरुमा भने आप्पाले कहिल्यै पछि फर्केर हेर्नु परेको छैन । त्यसयताका १९ वर्षमा उनले १९ सै पटक सगरमाथा चढिसकेका छन् । सन् १९९६ र २००१ मा उनले सगरमाथा चढेनन् तर १९९२ मा एकैवर्ष दुईपटक सगरमाथा चढे । आत्मीय पर्वतारोही मित्र बाबुछिरी शेर्पाको आरोहणकै क्रममा निधन भएपछि सन् २००३ मा आप्पाले पर्वतारोहणबाट सन्यासको घोषणा पनि गरेका थिए । तर त्यो कार्यान्वयन भने भएन ।
सन् २००६ को डिसेम्बरदेखि आप्पा अमेरिकाको ड्रापरमा श्रीमती र छोराछोरी समित बसिरहेका छन् । आप्पाले पटकपटक भन्ने गरेका छन् - ँकीर्तिमान राख्ने कुनै योजना पनि थिएन । मैले कीर्तिमान राख्ने सपना पनि कहिल्यै देखिना । म कहिल्यै कीर्तिमानको पछि लाग्दिना पनि’
तर के गर्नु जब कीर्तिमान नै आप्पाको पछि लागिदिन्छ
Posted by Naresh at 6:27 PM2comments:
जंगी अड्डाबाट बाँडियो भिडियो
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ समेटिएको विवादास्पद भिडियो टेप नेपाली सेनाको सैनिक मुख्यालयबाट बाँडिएको पाइएको छ ।
सरकारले रुक्माङद कटवाललाई प्रधानसेनापतिबाट हटाउन स्पष्टीकरण सोधेपछि मुख्यालयले सो भिडियो टेप राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, नेकपा एमाले का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा संविधानसभामा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई बाँडेको स्रोतले बताएको छ ।
यस्तैगरी, सेनाले उक्त भिडियो नेपालस्थित भारतीय राजदूत, अमेरिकी राजदूत तथा विभिन्न कुटनीतिक नियोगमा अंग्रेजी भाषामा उल्थासहित वितरण गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कटवाल प्रधानसेनापति रहेका बखत डेढवर्ष अघि एक जनमुक्ति सेनाको सहयोगमा सो भिडियो टेप जनमुक्ति शिविरबाट बाहिर ल्याइएको थियो ।
कटवालका तत्कालीन स्टाफ मेजर डिकबहादुर थापाले भिडियो बाहिर ल्याउन जनमुक्ति सेनाका एक उपकमाण्डरसित सम्पर्क सुत्रको काम गरेको स्रोतले बतायो । टेप बाहिर ल्याउने योजना सफल पारेवापत मेजर थापालाई कटवालले पुरस्कृत समेत गरेका थिए । उनलाई पुरस्कृत गरेर अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अन्तर्गत कंगो पठाइएको छ ।
चितवनको शक्तिखोरस्थित जनमुक्ति सेनाको तेस्रो डिभिजनमा १८ महिना अघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रशिक्षण दिने क्रममा तयार पारिएको भिडियो बाहिर ल्याउन सैनिक मुख्यालयले ती छापामारलाई तीन किस्तामा पैसा पठाएको थियो ।
उपकमाण्डर तहका ती छापामारलाई नेपाली सेनाले मोवाइल समेत किनिदिएको थियो भने टेप तयारीको सम्पूर्ण जिम्मा डिकबहादुर थापालाई दिइएको थियो’ स्रोतले बतायो । थापाले कटवालको सीधा सम्पर्कमा रहेर टेप हात पारेको पनि स्रोतले थप्यो । स्रोतका अनुसार कटवालले त्यतिबेलै जनमुक्ति सेनामा विद्रोह गराउन लागि ती उपकमाण्डरलाई प्रस्ताव गरेका थिए ।
डेढवर्ष अघि प्राप्त भिडियोलाई राष्ट्रपति, राजनीतिक दलहरु, कुटनीतिक नियोग र सञ्चारमाध्यममा लैजानु अघि प्रिन्सिपल स्टाफ अफिसर्स पीसीओजको बैठक समेत बसेको थियो । बलाध्यक्ष कुलबहादुर खड्कालाई नबोलाइएको सो बैठकको निर्णय अनुसार नै भिडियोलाई वितरण गरिएको थियो । तर भिडियो सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण गरिने योजना भने सेनाले राष्ट्रपतिलाई सुनाएको थिएन ।
भिडियोको सम्पादन तथा वितरण सेनाको मनोवैज्ञानिक अपरेसन कार्य महाशाखाले गरेको थियो । नेपाली सेनाका प्रवक्ता रमिन्द्र क्षेत्री सो महाशाखाको स्थापनाकालदेखि प्रमुख छन् ।
स्रोतका अनुसार भिडियोलाई प्राविधिक रुपमा गुणस्तरीय बनाउने काम महाशाखाका कम्प्युटर अपरेरटर बालकृष्ण शर्माले गरेका थिए । भिडियो अत्यन्तै रफ थियो, बालकृष्णले त्यसलाई सम्पादन गरेर स्तरीय बनाएका हुन्’ स्रोतले भन्यो ।
द्वन्द्वकालमा माओवादीविरुद्ध मनोवैज्ञानिक दुस्प्रचार फैलाउन खडा गरिएको सो महाशाखा अहिले पनि क्रियाशील छ । स्रोतका अनुसार महाशाखाले माओवादीबाट हत्या गरिएका पत्रकार ज्ञानेन्द्र खड्का तथा माओवादीबाट गरिएको बस आगजनीमा मारिएकी बालिका काजोल खातुनका बारेमा पनि भिडियो तयार गरी कुटनीतिक नियोगमा वितरण गरेको थियो ।
पछिल्लो समयमा सो महाशाखाले सैनिक रणनीति र नेपालको प्रतिरक्षा रणनीति पनि तयार गरेको छ ।
ब्रिगिडियर जनरल रमिन्द्र क्षेत्री उनका सहोदर भाइ कर्णेल रतिन्द्र क्षेत्री, प्रमुख सेनानीहरु विनयविक्रम राणा, सुरेन्द्रसिंह रावल, अनुपजंग राणा र कर्णेल सन्तोषबल्लभ पौडेल सो महाशाखामा कार्यरत् हुनुहुन्छ । ब्रिगिडियर जनरल क्षेत्री र राणा बाहेक अन्य सो विभागमा काजमा ल्याइएका छन । कर्णेल क्षेत्री पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका स्टाफ थिए भने थापा रेञ्जर गणका गुल्मपति, पौडेल गणेशदल गणका गणपति र रावल स्टाफ कलेजबाट काजमा आएका थिए ।
भिडियो कटवाललाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेपछि बाहिर ल्याइएको थियो । सुरुमा एउटा साप्ताहिकले यही भिडियोबाट समाचार बनाएको थियो । राष्ट्रपति यादवले कटवाललाई प्रधानसेनापतिमै काम गर्न पत्राचार गरेर असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजिनामा दिएपछि यो भिडियोलाई मूलधारका सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण र प्रकाशन गरेका थिए ।
Posted by Naresh at 7:12 PM 1 comment: